Ndingamisa sei pacifier yangu kubva kumwana wangu?
Bvisa pacifier | Baby childddler
Chigunwe chinonzi lollipop
Kudzora kunobatsira kuita zvishoma nezvishoma kubvuma
Easter bunny, Santa Claus uye pacifier fairy muchiito
Vacheche nevana vaduku havakwanisi kufungidzirwa pasina pacifier, nokuti ivo vanodarika kana zvishoma ivo vanovadavira uye vabereki vanofara apo vana dzimwe nguva vanoiswa kuzorora. Zvisinei, vabereki vakawanda vanonzwa vasina kuchengeteka pavanotarisana nenguva yakanakisisa yekubvisa yavo pacifier.
Dzimwe nyanzvi dzinoti mwana anofanira kurumurwa kubva pacifier gore risati rasvika rehupenyu.
Chikonzero cheizvi ndechokuti kushandiswa kwekusingaperi kwe pacifier ingozi yokuti kuora kwemazino kana jaya kunowanikwa mumwana.
Zvisinei, chirevo ichi hachikwanisi kushandiswa kumwana mumwe oga, sezvo kukura kwechidiki chinowanzobudirira pamitengo yakasiyana.
Kune vana vazhinji, pacifier inonyanya kushandiswa kugutsikana. Kunyanya pausiku iye zvino anowedzera kudiwa. Chinokonzera pacifier kushandiswa ndechimiro checheche. Iko kufungidzira kunokonzera kukurudzira kwekuyamwisa pachipfuva chaamai, icho chinokosha pakukura kwechecheche. Kuyamwisa mukuwedzera kune chikafu kunowedzera kugadzirisa basa.
Vanaamai vakawanda vanoyamwisa vanosimbisa kuti mwana anowanzonyarara usiku kunze kwechipo chezamu. Iyo pacifier inogona kuita basa rakafanana.
Kana iwe usingaiti mwana wacho pacifier, zvinogona kuitika kuti mwana achisarudza chigunwe panzvimbo ye pacifier.
Zvisinei, kana munhu achitenda maonero eongororo, saka chigunwe chinomwa asi apo pacifier inoshandisika, Zvimwe zvikonzero zvakamboitika kuti kuyamwa pa pacifier kunoratidza kuti yakasiyiwa munguva pfupi kupfuura iyo inoyamwa pachigunwe.
Izvo zvinogona kushandiswa kwemazino, izvo zvinogona kukonzerwa nekuyamwisa kwenguva yakareba, zvinowedzerawo zvakanyanya nechigunwe kupfuura che pacifier.
Mukuwedzera, iwe unogona kukwanisa kupa chipo chekusimudza zviri nani kudarika chigunwe icho mwana anogara aine. Kunyange zvakadaro, kune vabereki vakawanda vatsva, mubvunzo unoramba uri, iwe unogona sei kuti mwana wako ave nani pane inodiwa pacifier zvakare?
Usati wanyura isati yatanga kuitika. Nokudaro, usaita kuti zvive kushandiswa kwekusingaperi kubva pakutanga, nokuti izvi zvichaita kuti kusvimha nyore kuve nyore gare gare. Kubva pakutanga unofanira kungoenda pacifier pane dzimwe nguva dzakadai sekurara kana kupa husimbiso.
Mukuwedzera, iwe haufaniri kumbomira kupa mwana paciferer kubva kune rimwe zuva kuenda kune imwe pakarepo. Zvisinei, zvinokurudzirwa kuti zvishoma nezvishoma usiye pacifier, nokuti kunyarara kwakakwana kunonyanya nyore. Vabereki vanofanira kutaurira kumwana uye vimbise kuti zvinogona kuva zvakanaka kuva musikana mukuru kana mukomana mukuru iye zvino uye kuti iwe haufaniri kutora pacifier zvakare.
Kuita kuti zvive nyore kuti vaduku vazorore, unogona kushandisa zvakasiyana-siyana zvinobatsira. Rimwe rinogona kunge, somuenzaniso, kuwana bhuku revana pamusoro pechinyorwa ichi. Pane kusarudzwa kukuru kwemabhuku akadaro anotaurawo, somuenzaniso, nyaya yegereji, mukoma kana mukoma.
Vana vakawanda vanotsvaga nyaya idzi uye vanoda kudzoka zvakare kakawanda. Conny haafaniri kubvisa pacifier, saka iwe unowanzokura kudiwa kwekumisa kudiwa kwekugadzirisa uye kusvimha nyore nyore.
Mwana anogona kunzwisisa kuti zvinganzwisisika kushandisa pacifier zvishoma.
Imwe nzira yakakura yekuita kuti zvive nyore kuti mwana ataure zvakanaka kune pacifier ndeyekupemberera zvakanaka zvakanaka kuitira kuti zvive pachena kumwana kuti chikamu chinouya kusvika kumagumo.
Kufanana nekurasikirwa kwezino, unogona kushandisa pacifier fairy sechinhu chinopindirana nechinangwa chakafanana nekuendesa pacifier.
Nyaya yacho inobva yatsinhanisa pacifier, inoiswa pasi pemutsiro, nokuda kwechipo. Imwe nzira ndeyekubatanidza Easter Bunny kana Kristu Child mukutengeswa kwe pacifier. Iko Easter bunny zvino inopatsanidza pacifier nokuda kwechipo chakanaka, kufanana ne pacifier fairy.
Ani naani ane vana vaduku vari mudenderedzwa rehama kana mhuri, anogonawo kukurukura kutumirwa kwe pacifier kune imwe nyika duku nevana vake. Mwana muduku anogona kutsanangurwa, somuenzaniso, kuti mwana muduku iye zvino zvakanyanya kudiwa nokukurumidza pacifier.
Sezvo vana vachida kuva vakwegura uye vane ruzivo, nyaya iyi inowanzoshanda zvakanaka. Zvichida zvakare pamwe chete ne pacifier fairy kana Easter Bunny / Christ Child, uyo achacherechedza uye nekuvimbika achabvuma izvi zvose zvakanaka. Zvakakosha chero zvipi zvayo kuti iwe unomanikidza mwana wako kuti asakure.
Mwana wose ane nguva yake. Saka usazvitambudza kuenzanisa, asi zvishoma nezvishoma dhonza mwana wako kubva pacifier. Zvakanaka dosed, iyi haisi njodzi yemeno evana - shure kwezvose, isu tose takapona pacifier.
Chisikiti cheMwana neChidiki | Health ...
Kuchengetwa kwemucheche mumuromo nemeno mazino mwana
Kuchengetwa kwevana - muviri kutarisira mwana
Kutarisira mwana - chishamiso mumwana
Coloring page pamuviri mwana
Kuchengetedza amai veji nechecheche
Coloring page siblings nevana
Kuchengetedza peji kumwisa mwana
Kuchengeta mavara amai nechecheche
Coloring page stork nemwana
Coloring page mwana